Etu esi ahụ ọnọdụ ebe anyị were ekwentị were see foto | Akụkọ akụrụngwa
Etu esi ahụ ọnọdụ ebe anyị were ekwentị were see foto
Ignacio Sala | | Mobiles, Nkuzi
Ama anyị abụrụla naanị ngwaọrụ anyị ji echekwa oge anyị kachasị mma, ọ bụrụ na ụbọchị anyị taa ma ọ bụ mmemme pụrụ iche. Ruo otu afọ ugbu a, ị nwere ike ịchọpụta na oge ọ bụla anyị nwetara igwefoto nke ngwaọrụ anyị maka oge mbụ, nke a na-ajụ anyị maka ikike iji nweta GPS.
Oge ọ bụla ama ama anyị rịọrọ anyị ozugbo, ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi site na ngwa ndị ọzọ, ana m ekwe ka ọnọdụ ahụ, anyị ga-enyerịrị ya ya ma ọ bụrụhaala na ọ bụ ngwa iji see foto, anyị ga-enye ya ya ka ọ bụrụ na akada na vidiyo, dekọọ nhazi ebe emere ya ka ị nwee ike ịkpọtụrụ ha n'ọdịnihu.
N'ụzọ dị otú a, ama anyị na-edeghị data metụtara njide ahụ, a na-akpọ metadata, kamakwa na-echekwa ebe nhazi ebe anyi mere ijide ma obu vidiyo. N'ihi ọrụ a, anyị nwere ike ịmepụta maapụ na mpaghara ndị anyị gara, maapụ ebe eserese onyogho niile nke otu ebe.
Ọrụ a dị na iOS na gam akporo, agbanyeghị, dịka ọ na-abụkarị ikpe dịka ha bụ nyiwe abụọ dị iche iche, ụzọ iji nweta ozi a, yana ụzọ isi gosipụta ọnọdụ ahụ dị iche. Mana, ọ bụghị naanị na anyị nwere ike ịnweta data a site na ngwaọrụ ejirila ihe eji ejide mmadụ, kamakwa Anyị nwekwara ike ịnweta ozi ahụ ozugbo na Windows PC ma ọ bụ Mac.
1 Hụ ọnọdụ nke foto na gam akporo
2 Hụ ọnọdụ nke foto na iOS
3 Lelee ebe foto dị na Windows
4 Lelee ebe foto dị na Mac
5 Gbanyụọ ọnọdụ igwefoto na gam akporo
6 Gbanyụọ ọnọdụ igwefoto na iOS
Hụ ọnọdụ nke foto na gam akporo
Na-enweghị ike ịbanye na ngwa ndị ọzọ, Android site na Google Photos, na-enye anyị ohere ịnweta ma ọnọdụ GPS nke ihe oyiyi dị ka ọnọdụ ya na map. Usoro ilere ọnọdụ anya na eserese ngosi foto site na Foto Google bụ:
Nke mbu, anyi aghaghi imeghe Foto Google ma pinye aka na onyonyo anyi choro ima.
Na-esote, pịa na isi ihe atọ dị na vetikal na anyị na-ahụ na elu aka nri nke ihuenyo iji nweta nkọwa nke ihe oyiyi ahụ.
Mgbe ahụ ụbọchị na oge anyị mere njide ahụ ka a ga-egosi. N'okpuru, el map na ọnọdụ na n'okpuru n'okpuru na-achịkọta. Iji gosi maapụ na ihuenyo zuru oke na ọnọdụ ahụ, anyị ga-pịa ya.
Hụ ọnọdụ nke foto na iOS
Na iOS, dị ka ọ dị na gam akporo, ọ dịghị mkpa ịbanye na ngwa ndị ọzọ iji nweta nhazi nke ihe oyiyi ahụ. Iji nweta nhazi, anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Nke mbụ, anyị ga-enyerịrị ngwa ahụ Foto ma pinye aka na onyonyo anyi choro inweta ebe ahu.
Mgbe ah anyị slide ihe oyiyi elu ịmata ọnọdụ / adreesị ebe emere njide ahụ, adreesị egosiri n'okpuru map na ọnọdụ ya.
Iji nweta maapụ ahụ ma tinye ya na kọntaktị, anyị ga-emerịrị ya pịa na maapụ nke mere na egosiri na ihuenyo zuru oke.
Lelee ebe foto dị na Windows
Nke mbu, anyi aghaghi ihu abuo na foto ka ihe nlere nke ngwa Windows meghee onyonyo a.
Ọzọ, anyị na-etinye òké ahụ n'elu ihe oyiyi ahụ wee pịa na aka nri. N’etiti nhọrọ dị iche iche egosiri, anyị na-ahọrọ Ozi faịlụ.
N'akụkụ aka ekpe nke ihe oyiyi ahụ a ga-egosipụta ozi ebe ahụ nke oyiyi dị na ajụjụ.
Lelee ebe foto dị na Mac
Ọ bụrụ na onyogho anyị chọrọ inweta ebe ahụ dị na Mac ma ọ bụghị na iPhone anyị, anyị nwekwara ike ngwa ngwa ịmata ebe, na-eme usoro anyị na-akọwa n'okpuru.
Nke mbu, anyi aghaghi imeghe onyonyo anyi choro iji nweta data onodu site na ngwa Previu.
Ozugbo anyị meghere onyinyo ahụ, anyị ga-pịa Ngwaọrụ> Gosi onye nyocha, nke dị na ogwe menu elu.
Na windo na-ese n'elu mmiri nke a ga-egosi n'okpuru, anyị ga-pịa n'ime nhọrọ ahụ GPS, iji gosipụta nhazi GPS yana maapụ ebe ahụ.
Gbanyụọ ọnọdụ igwefoto na gam akporo
Usoro dị na gam akporo iji gbochie ma ọ bụ belata ikike nke ngwa nwere, bụ otu ihe ahụ iji nwee ike wepu ohere na ngwa Igwefoto, ya mere ọ bụrụ na ị banyela na mbụ ikikere nke ngwa ndị ị rụnyere, ị ga-ama usoro iji mee ya, usoro nke, ọbụlagodi, anyị zuru ezu n'okpuru.
Nke mbu, anyi aghaghi ibanye na Ntọala nke ngwaọrụ anyị.
Ọzọ, anyị nweta menu Aplicaciones anyị na-achọ ngwa ahụ Igwefoto.
Site na ịpị na ngwa ahụ Igwefoto, ọ ga-egosi ikikere niile nke ngwa a nwere na sistemụ anyị. Naanị anyị ga-enyocha ọnụọgụ ọkụ Ebe.
I gha iburu n'uche na ọ bụrụ na anyị ejiri ngwa ọzọ weghara Na ekwentị gam akporo anyị, anyị ga-ewepụkwa ohere ịbanye na ọnọdụ ahụ, ebe ọ bụ na ọ ga-echekwa nhazi nke njide niile anyị mere. N'okwu a, site na ịghara iji ngwa ọzọ nke na-abụghị nwa amaala Google, naanị m nwere nkwarụ ịnweta ọnọdụ nke naanị ngwa m na-eji.
Gbanyụọ ọnọdụ igwefoto na iOS
Ọ bụrụ na oge ọ bụla, ịchọghị ka iPhone gị dekọọ ebe ihe oyiyi ị jidere, anyị nwere ike gbanyụọ igwefoto ozugbo na ọnọdụ anyị. Otú ọ dị, nke a abụghị ezigbo echiche, ebe ọ bụ na ọ ga-abụ na anyị agaghị achọ ịchekwa ebe ihe oyiyi anyị dị. Na nke a, iOS na-enye anyị nhọrọ atọ dị iche iche: mgbe, jụọ oge ọzọ na mgbe ejiri ngwa ahụ.
Accessnweta nhọrọ atọ nke iOS na-enye anyị ohere igosipụta iji debe ebe anyị nọ mgbe ị na-ese foto, emela ya ma ọ bụ jụọ anyị oge ọ bụla anyị mepere igwefoto, anyị ga-emerịrị usoro ndị a:
Nke mbu anyi nweta Ntọala site na iOS.
Na-esote, pịa na Nzuzo. N'ime Nzuzo, anyị nweta Ebe.
N'ime Ọnọdụ, anyị na-enweta nhọrọ igwefoto. Nkebi nke a ga - egosi nhọrọ atọ nke iOS na - enye anyị metụtara ịdenye igwefoto: mgbe, jụọ oge ọzọ na mgbe ejiri ngwa ahụ.
Ọ bụrụ na anyị achọghị ịchekwa oge nke foto anyị na-ese, mana anyị achọghị ịkwụsị iji ya n'oge ụfọdụ, nhọrọ kachasị mma anyị nwere ike ịme bụ nke abụọ: jụọ oge ọzọ. Site na ịhọrọ nhọrọ a, igwefoto nke ngwaọrụ anyị nỌ ga - ajụ gị oge ọ bụla anyị mepere ya, ma ọ bụrụ na anyị chọrọ iji GPS nke iPhone anyị ka ịdekọ ọnọdụ gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Etu esi ahụ ọnọdụ ebe anyị were ekwentị were see foto
Galaxy Z Flip: ihe ọ bụla ị chọrọ ịma banyere Samsung ọhụrụ foldable smartphone
Nkà na ụzụ na-atụ aro iji nye na inepo .bọchị